न्यू क्यालेडोनियानजिकै ७.५ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प- विश्व - कान्तिपुर समाचार
न्यू क्यालेडोनियानजिकै ७.५ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
मंसिर १९, २०७५ रासस/एपी
वेलिङ्गटन, न्यूजिल्याड — न्यू क्यालेडोनियानजिकै दक्षिण प्रशान्त महासागरमा बुधबार ७.५ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ । भूकम्पपछि नजिकै रहेको द्वीपहरुमा सुनामीको चेतावनी दिइएको सम्बन्धित आधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रशान्त महासागरीय सुनामी चेतावनी केन्द्रअनुसार न्यू क्यालेडोनिया र भानुआटुका केही तटीय इलाकामा १ देखि ३ मिटरसम्मका अग्ला छालहरु आउने अनुमान गरिएको छ । फिजीमा समेत तीन मिटरसम्मको सामुद्रिक छाल आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सुनामी चेतावनी केन्द्रले हवाईमा भने सुनामीको सूचना जारी गरेको छैन । यस शक्तिशाली भूकम्पपछि पाँच पटकसम्म ५.६ र ६.० को परकम्पन आएका थिए ।
अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था (युएसजिएस)का अनुसार यस भूकम्पको केन्द्रविन्दु न्यू क्यालेडोनियाबाट १६८ किलोमिटर पूर्वी १० किलोमिटर गहिराईका रहेको छ । न्यू क्यालेडोनियामा बारम्बार भूकम्पको प्रकोपले सताउने देशहरुको सूचीमा पर्दछ ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ १९:५४
तीन वर्षको अवधिमा भारतमा रेलले किचेर ५० हजार जनाको मृत्यु
कार्तिक ६, २०७५ रासस/एपी
नयाँ दिल्ली — भारतमा सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा बाटो काट्ने क्रममा रेलले किचेर करिब ५० हजार जनाको मृत्यु भएको छ ।
रेलमार्गबाट बाटो काट्ने क्रममा तीन वर्षमै यति ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु भएको बताइएको हो। भारतीय रेलसेवाले मंगलबार सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
भारतको पञ्जाबमा हालैमात्र यसरी नै रेलको लिकमा परेर ६१ जनाको ज्यान गएको थियो। सो दुर्घटनापछि भारतीय रेलसेवा कार्यालयले यो जानकारी गराएको हो।
रेलमार्गको नजिकैबाट भारतीय हिन्दूहरुको चाड नवरात्रका अवसरमा लागेको मेला हेर्ने क्रममा अकस्मात रेल आएर किच्दा उनीहरुको मृत्यु भएको थियो। यस तीन वर्षमा ४९ हजार ७९० जनाको ज्यान गएको उक्त कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भारतीय रेलसेवा कार्यालयले यस्तो दुर्घटना घटाउन कैयौँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताएको भए पनि मृत्यु भने नघटेको बताइएको छ।
भारत विश्वमै सबैभन्दा ठूलो रेल सञ्जाल भएको देश हो। भारतमा दैनिक लाखौं व्यक्तिले रेलमार्गबाट यात्रा गरिरहेका हुन्छन्।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ १५:५४
प्रदर्शनकारीको भीडका कारण हङकङ विमानस्थलबाट हुने सबै उडान रद्द
जोन्सनको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवा
पूर्वी चीनमा आँधीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुग्यो, १८ वेपत्ता
के सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरण सम्भव छ ?
दुई वर्ष नबित्दै पार्टीको कमाण्ड फेरि सोनियाकै हातमा !
उत्तर कोरियाद्वारा फेरि क्षेप्यास्त्र परीक्षण